ठकवक तान्त्रिक र स्यापिन्यस सपना - अनुभूति - नेपाल
यौन सुखमा लिप्त ए पुरुष ! तँलाई आश्चर्य भएको छैन कि यो के भइरहेको छ ? यो जुन आनन्द यहाँ भइरहेको छ, त्यो आनन्द खासमा कसलाई भइरहेको छ ?
पाँच वर्षअघिदेखि मेरो मनमा एउटा हुन्डरी चल्दै आएको छ । मलाई यस्तो लाग्छ कि मान्छेको आदिम अंग ‘पैताला’ हो । मान्छेको जातले जे पाएको छ, जे गुमाएको छ, त्यो सब पैतालाको कारणले हो । त्यो कुनै कार्ल माक्र्सले भनेजस्तो पेटको कारणले होइन । न कुनै फ्रायडले भनेजस्तो यौनका कारणले हो । वा कुनै मानवतावादी मनुवाले भनेझैँ हृदयको कारणले हो । न कुनै शास्त्रीय दार्शनिकले भनेझैँ टाउकाका कारणले हो । न कुनै औपनिवेशिक सम्राट्ले भनेझैँ गर्धन र पाखुराका कारणले हो ।
मान्छे जात मुसाफिर जात हो । नयाँ नयाँ जमिनलाई पैतालाले कुल्चिने उत्कण्ठा मान्छेको आदिम उत्कण्ठा हो । यही उत्कण्ठाले कुतकुत्याएर मान्छेको जात अस्ट्रेलिया पुग्यो, अमेरिका पुग्यो । उही आदिम इच्छाले तानेर मान्छेले डरलाग्दा हिँउका गल्छेँडाहरू कट्यो । मरुभूमिहरू छिचोल्यो । महासागर तर्‍यो । मान्छे त्यसै पैँतालामा उभिएको हुँदै होइन ।
पैँतालामा उभिने जमर्को मान्छेको खतरनाक जमर्को हो । यसका लागि मान्छेले ठूला जैविक र जिनेटिक मूल्य चुकाएको छ । पुस्तापुस्ताले तिर्नुपर्ने गरी ठूलो स्याक्रिफाइस भएको छ । पैँतालामा ठाडो उभिएकै कारणले मान्छेको जात ‘प्रिम्याच्युअर’ जन्मन्छ । जनावरहरू जन्मनेबित्तिकै उफ्रन्छन् तर मान्छेको बच्चालाई आत्मसुरक्षाको हैसियतमा पुग्न कति समय लाग्छ ? सीधा उभिँदा पाठेघरमाथि पर्ने अतिरिक्त बोझका कारणले नै यस्तो भएको हो ।
हुन्डरीले एउटा गोरेटो समातेर मैले उपन्यास लेखेँ । सोही उपन्यासको फाइनल कपी लेख्न नेपालगन्ज जाँदै थिएँ । अचानक कुमार नगरकोटी दाइको एब्रप्ट एसएमएस आयो । ‘फलानो किताब खुरुक्क पढ । यसमा के छ पनि मलाई नसोध । कहाँ पाइन्छ पनि नसोध । किताबको आफैँ सिकार गर ।’
मान्छेको जात सिकारी जात त हुँदै हो । बुक हन्टिङ मेरो पनि सोखको विषय । अनुभवको विषय । जनाउको पाँचौँ दिनमा किताब हात लाग्यो । युभल नोह हरारीको ‘स्यापियन्स’ । मान्छेको इतिहासमाथि लेखिएको यो किताबले मैले लेखिभ्याएको उपन्यासलाई यस्तरी उकेरा लगायो, म यसको पुन:सम्पादन गर्न जनकपुर हिँडेँ । यो निबन्ध म जनकपुरबाटै लेखिरहेको छु ।
मलाई एउटा अनौठो अनुभव छ । मास्टरीकालमा ‘पैसा’ अनकाउन्टेबल नाउन (असंख्येय संज्ञा) हो भनेर बुझाउन मलाई सदैव हम्मेहम्मे पथ्र्यो । सम्भवत: संसारमा सबैभन्दा ज्यादा गणना गरिने जिनिस हो पैसा । यसैलाई ‘अनकाउन्टेबल’ करार गर्नु चानचुने बात थिएन ।
‘रुपियाँ, डलर, पाउन्ड, यान, दिराम आदि पैसाका एकाइ मात्र हुन् । पैसा होइनन् !’ यति भनेर सम्झाइदिएकामा विद्यार्थीहरू सम्झिदिएको जस्तो गर्थे । तर, एउटा न एउटा चम्बु विद्यार्थी जुरुक्क
उठ्थ्यो र सोधिहाल्थ्यो :
‘उसो भए पैसा के हो त नि माड्साप ?’
‘हेर बाबुनानी, पैसा एउटा विश्वास हो । मान्छेको कल्पना हो ।’ म भन्न खोज्थेँ । तर, सक्दिनथेँ । विद्यार्थीहरूबाट मास्टर बहुलाएको हल्ला फैलन सक्ने भय बढेर आउँथ्यो ।
स्यापियन्स अर्थात् हामी । हाम्रो मान्छे जात । हामीले कल्पनालाई यस्तरी वस्तुमा परिणत गरिदियौँ कि सम्पत्ति, पैसा, देश, कानुन ... सबका सब हामीलाई भौतिक सत्य लाग्न थालिसकेका छन् । हरारी भन्छन्, ‘ व्यापार, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, धर्म आदि सबै खासमा विश्वासमा अडिएका अप्राकृतिक कुरा मात्रै हुन् । मानव अधिकार भन्ने कुरा मान्छेको आविष्कार मात्रै हो । देश उस्तै आविष्कार हो । धर्म, पैसा, भाषा पनि खासमा मान्छेका अविष्कार मात्रै हुन् । संज्ञानात्मक विकासको चरणमा मान्छेले विकसित गरेको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ‘ काल्पनिक सत्य’को अविष्कार हो । यस्तो सत्य, जसले मान्छेलाई मान्छेसँग जोडिराख्न मद्दत गर्छ ।
एउटा नेपाली लिम्बु मानौँ कुनै अन्जान देशमा १५ वर्षदेखि छ । १५ वर्षपछि सोही देशमा उसको भेट अर्को नेपाली थारूसँग हुन्छ । अनि, अचानक त्यो थारू लिम्बुको सर्वाधिक प्रिय भइदिएर आउँछ । आफूलाई १५ वर्षदेखि गाँस, बास दिएका, माया दिएका त्यो अन्जान देशका नागरिकभन्दा भर्खरै आएको नेपाली थारू किन उसलाई सर्वाधिक प्रिय लाग्यो होला ? किन विश्वसनीय लाग्यो ? बात साफ छ । राष्ट्रियताको कारणले ।
धर्म, राष्ट्रियता, कानुन, मानव अधिकार, पैसा आदिले मान्छेलाई अनन्त एकाइका अन्जान मान्छेलाई पनि नियन्त्रण गर्न सघाउँछ । नेपालमा (देशको उदाहरण मात्रै) बस्नेहरू सबै नेपालको कानुन मान्न विवश छन् । भलै उनीहरूमध्ये धेरैलाई कानुनमा के छ भन्ने जानकारी पनि हुँदैन । हामी हामीलाई थाहै नभएको कुरामा पनि विश्वास गर्छौं । कल्पना गर्नूस् त, एक दिन संसारका सबै मान्छे जंगली भए भने के हुन्छ ? तिनीहरूले ओशो वा हिप्पीका झैँ देश, कानुन, धर्म र मर्यादालाई मान्दैनौँ भनिदिए भने के हुन्छ ? भाषाको कारणले मात्रै हामीले यस्ता काल्पनिक सत्यको निर्माण गर्न सकेका हौँ । काल्पनिक सत्यको बलमा हामी हाम्रो प्रभाव र नियन्त्रणलाई मजबुत बनाउन चाहन्छौँ । त्यसैले त मिसनरीहरू धर्म प्रचारमा हिँड्छन् ।
भाषाले हामीलाई यस्तरी जोड्यो कि मिलेर बस्न, लडाइँ–झगडा नगर्न, एकले अर्कालाई सहयोग गर्न मान्छेले मान्छेलाई चिन्न नपर्ने भयो । ईश्वर, राष्ट्र, धर्म आदि जस्ता साझा कल्पनामा विश्वास गरेर हामीले सामूहिक जीवन बाँच्न थाल्यौँ । हिजो जंगलमा बाघ, भालु, सर्प आदिसँग जोगिँदै जोगिँदै सन्तान जोगाएका हामीसँग अहिले फुर्तिला कार छन् । आकाश छुने महल छन् । हवाईजहाज छन् । तर, हरारी भन्छन्, ‘हाम्रो जिनले घरीघरी ठान्छ कि हामी अझै पनि सभानातिरै छौँ । हामी भौँतारिन चाहन्छौँ । मान्छेको निराशा, एकाकीपनको कारण त्यही हो ।’ मनोविज्ञानले के भन्छ भने संसारका सबै मान्छे चिल्लोचाप्लो र गुलियो भनेपछि मरिहत्ते गर्छन् । यो एक आदिम चाहना हो । आजभन्दा ७० वर्ष पहिले रसिला र गुलिया फल खानु भनेको कहिलेकाहीँ मात्रै नसिब हुने कुरा हुन्थे । मान्छेले छुन नपाउँदै जंगली फल चरा र बाँदरले सखाप पारिसके का हुन्थे । कृषिकालपछि मात्रै मान्छेलाई गुलियो फल सर्वसुलभ भएको हो । आदिकालको गुलियो प्रेम अझै हाम्रो जिनमा सुरक्षित छ र त हामी बोसो र गुलियोलाई यतिविघ्न स्वाद गर्छौं ।
कतिलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर अहिलेको ‘यौन’ पनि मान्छेको आविष्कार नै हो । किनभने, यौन मान्छेले आविष्कार गरेको ‘सौन्दर्य चेतना’बाट निर्देशित हुन्छ । करिब पाँच महिना पहिले मैले एउटा फेसबुक स्ट्याटस लेखेको थिएँ । ‘यौन मान्छेको अविष्कार हो ।’ तिनताका म एउटी कुरूप आइमाई ‘लोथिरा साह’लाई मेरो उपन्यासको पात्र बनाएर कथामा घुसाउँदै थिएँ । लोथिरा जो यति कुरूप छे कि उसलाई देखेपछि रनाहामा परेको यौनांग पनि तत्काल शिथिल भइजान्छ । हुल्हुली बान्ता निस्कन थाल्छ ।
भाषाकै बलमा मान्छेले ठीक र बेठीकको निर्माण गर्‍यो । सुन्दर र कुरूपको अवधारणा विकास गर्‍यो । कृषि क्रान्तिपूर्वको समयमा जब कुनै वृद्धा समूहको लागि बोझ अनुभूत हुन्थी, उसको पछिपछि आएको कुनै युवकले पत्थरले टाउकोमा बजाउँथ्यो र हत्या गरिदिन्थ्यो । नचाहेको बच्चा, अपांग वा दीर्घ रोगीलाई पनि त्यसै गरिन्थ्यो । त्यो न ठीक थियो, न बेठीक । जस्तो : हामी ‘हिजो राती भएको सम्भोगबाट गर्भ रहेको’ डरमा रोधकचक्की खाएर गर्भपात गर्छौं । के हामी गर्भपातलाई बेठीक मान्छौँ ? त्यो पनि भोलिपल्टै गरिएकालाई ? ठीक त्यस्तै मनोदशामा अशक्त वृद्ध मारिन्थिन् ।
ठीक र बेठीकको चलन भाषाकै देन हो । यसकै बलमा नीतिशिक्षा बने । धर्म बने । नियम–कानुन बने । संविधान बने । अचेल हामी मानव अधिकारभन्दा माथि उठेर पशु अधिकारका बात मार्ने भइटोपलेका छौँ । कुन दिन कुन सन्काहाले ‘वनस्पती अधिकार’को कुरा पनि ननिकाल्ला भन्ने छैन ।
‘स्यापियन्स’ पढेको एक हप्तापछि मलाई स्वप्नदोष भयो । बिहेपछि भएकै थिएन तर खै किन भयो भयो त्यस दिन । सपनामा मैले भित्ताभरि सूर्य देखेँ । चन्द्रमा, बिच्छी, कछुवा, माछा, सुगा, बाँस, आँप घारी सबका सब देखेँ । भित्ताभरि तान्त्रिक तवरले कोरिएका चित्र देखेपछि मात्रै मलाई थाह भयो, म कोहवर घरमा छु । नभन्दै बाँसघारीको छेउबाट आँखा फुट्लाजस्तै एकोहोरो मलाई हेरिरहेको ठकवकलाई देखेँ ।
ठकवकले सोध्यो, ‘यौन सुखमा लिप्त ए पुरुष † तँलाई आश्चर्य भएको छैन कि यो के भइरहेको छ ? यो जुन आनन्द यहाँ भइरहेको छ, त्यो आनन्द खासमा कसलाई भइरहेको छ ?’
मैले यसरी सोचेकै थिइनँ । सोच्नेबित्तिकै मेरो शरीरमा अचानक एउटा तान्त्रिक क्रान्ति घटित भएझैँ भयो । म मुस्कुराएँ । ठकवक बोल्यो, ‘इन्द्रियको त्यो भाग जसलाई हामी समात्न सक्दैनौँ, त्यो हो आत्मा । आत्माको त्यो भाग जसलाई हामी समात्न सक्छौँ, त्यो हो शरीर । भन सम्भोगले कसलाई आनन्द भयो ?’
प्रश्न सुन्नेबित्तिकै भित्ताको चित्रमा भएको बाँसको घारीबाट सुगा उठ्यो । बाँसको भेदमा भएको त्रिभुजाकार योनि विलुप्त भयो । ठकवक पनि गायब भयो । बिच्छी, सर्प, कछुवा हराइगए । म जुरुक्क भएँ । खुट्टाका कापबाट स्वप्नदोष बगिरहेको थियो ।
‘भोग गर तर आत्मालाई माथि राख । संसारका सबै रंगको आनन्द लेऊ । तर, भोक्ता भएर होइन, द्रष्टा भएर । साक्षी भएर । तिमी विदेह भैजाऊ ।’ अष्टावक्र सम्झेँ । अनि, बोरा बिस्तरा पोको पारेर कुदेँ जनकपुर ।
हरारी मान्छेको इतिहासलाई चार कालमा बाँड्छन् । करिब ७० हजार वर्ष पहिले मान्छेमा संज्ञानात्मक क्रान्ति भयो । तिनताका विश्वका मान्छेका कम्तीमा पनि एक दर्जन जात थिए । हाम्रो जाति ‘होमो स्यापियन्स’ले सबैलाई विस्थापित गर्दै अघि आयो । अहिले मान्छेको जातमा ‘स्यापियन्स’ मात्रै जीवित छौँ । कल्पना गर्नूस् त, बाघ र सिंह भएझैँ यौनिक साझेदारी सम्भव नभएको अरू जातको मान्छे पनि अझै सृष्टिमा भएको भए के हुन्थ्यो होला ? खैर, यी भात पचाउने कल्पना मात्रै हुन् । पृथ्वीनारायणले एकीकरण नगरेको भए नेपाल के हुन्थ्यो भनेजस्तै ।
अनि, ११ हजार वर्षअघितिर मान्छेले कृषि क्रान्ति गर्‍यो । सिकार गर्ने र खानेकुरा खोज्ने ‘फोरेजर’ समूहलाई स्थिरताको बाटो देखाउँदै कृषि युगको आरम्भ भयो । करिब पाँच सय वर्ष पहिले वैज्ञानिक क्रान्ति सुरु भयो । यसले २ सय ५० वर्ष पहिले औद्योगिक क्रान्ति गर्‍यो । जसको जगमा ५० वर्ष पहिले मान्छे सूचनाको युगमा प्रवेश गर्‍यो । मान्छे जैव–प्राविधिक (बायोटेक्नोलोजिक) क्रान्ति गर्दै छ, जो सुरुआती चरणमै छ । हरारी शंका गर्छन् कि बायोटेक्नोलोजीको विकासले होमो स्यापियन्स् अर्थात् हामी मान्छेको जातलाई विस्थापित गर्नेछ । हाम्रो सट्टामा बायोइन्जिनियरिङ गरिएका अमोर्टल साइबोर्ग मान्छेहरूले राज गर्नेछन् । यिनीहरू अमर अर्थात् ‘इमोर्टल’ त हुने छैनन् तर हत्या, आत्महत्या वा दुर्घटनाबाट जोगिएमा सदा बाँचिरहन सक्ने ‘अमोर्टल’ हुनेछन् ।
प्रकाशित: माघ १०, २०७३
हिरासतमा मैले जे भोगेँ : र्‍यापर भिटेन
चिनियाँ भाषा : लजायो कि बितायो